Kedu ka Milestones, 2019, Mazda, LA2018？ Kedu ka Milestones, 2019, Mazda, LA2018？ - LFOTPP dị
Kedu ka Milestones, 2019, Mazda, LA2018？
Ọ bụ echiche ọhụụ banyere asụsụ Kodo mepụtara. Onye na-arụzi ụgbọala na-ekwu na ọ bụ ụdị dị mfe.
N'uhuruchi mmeghe nke Los Angeles Motor Show, Mazda gosipụtara “ihe atọ atọ” na mmechi emechiri emechi. Ọ bụghị okwu banyere teknụzụ, n'etiti ndị na - ekwu okwu - ọ bụghị otu injinia. Naanị ndị mmebe! O doro anya na ihe ngosi a bụ teaser tupu ụlọ ezuru oke na ngosipụta akpaaka. Ma nkwa ekwee doro anya: isi ihe na Mazda3 ọhụrụ bụ nhazi.
N'ezie, imewe - ị ga - elele naanị ha. Hadị ndị ike gwụrụ ruo oke, ọnụ dị oke ọnụ, echiche na-egosipụta, eriri windo na-akpọ oku site na njiko, ihe dị iche iche nke ikuku ... Ee, ndị a bụ ụfọdụ ụgbọ ala echiche!
Rịba ama etu ihe dị na igwe igwe abụọ a. Enweghị ịkpụzi, antennas nke mpụga, ntụgharị mgbapụta, na-akpụgharị ọgịrịga ... Ọbụna ikuku ikuku dị n'ihu ihu na-ezo zoro ezo. Ọ bụrụ na ndị mmebe ahụ maara ụzọ ha ga-esi kpochapụ ntụpọ mmanụ na aka aka - mechie ọnụ, ha ga-eji ya. Ekwuputara otu agụụ Manic ahụ maka ịdị ọcha site n'aka ndị nrụpụta nke Mercedes-Benz, na usoro nke minimalism, "treshka" ọhụrụ dabara na Mercedes-AMG GT supercar.
Mazda etinyebeghị uche na ụlọ akwụkwọ ndị Japan mepụtara ruo ogologo oge - ụlọ ihe nkiri atọ dị na mba Japan, Germany na USA mepụtara ụgbọ ala ndị na-adọrọ adọrọ. Agbanyeghị, nkà ihe ọmụma dị n’azụ usoro niile bụ nke Japanese.
Ikuo Maeda - Usoro echiche Mazda. Kama ịtọhapụ ndị na-ege ntị na ntọala okwu mmalite nke okike ahụ, ọ na-egosi ihe ngosi ole na ole nwere ụgbọ ala echiche dịkarịsịrị iche, nke onye ọ bụla nọ ebe ahụ amabeghị.
"Echegbula, Mazda3 ọhụrụ adịghị ka ụgbọ ala a," - bupụrụ ajụjụ Maeda mbụ. Emepụtara ego a 3D n’ime ụbọchị atọ. Anyị anakọtara ihe ndị mejupụtara ụlọ ọrụ, dị ka nkọwa nke onye nrụpụta, tinyeziri ntakịrị ihe ijuanya na nke a na-ahụ anya na nchịkọta akụkọ nwere akụkụ atọ. Maeda na-akpọ ụdị ọrụ ahụ ọsọ ọsọ, mana, ọ naghị amata ọrụ a.
N’ime slide ọzọ - nke afọ gara aga echiche ụgbọ ala Vision Coupe. Wasdị ya wee nke ọma ruo afọ abụọ. Ejiri ụdị 3D buru ụzọ dị ogologo, nke na-ese ihe ma bụrụkwa nke enweghị mgbagha site na aka gị. Ejirila plastik zuru ezu zuru oke. Ọ bụghị n'ụzọ ochie ụzọ - ọ dị otu a. Enwere ike ịhapụ usoro ya niile, mana ụfọdụ ekwesịrị ịhapụ ndị mmadụ. Eji m n’aka na nke a bụ ihe Maeda tinyere n’ime akụkọ mmemme Car ọhụrụ dịka Art - “Car dị ka Art”.
Mazda3 dị ka ọrụ mmadụ kere. Can nwere ike ihu aka nke wepụrụ sketị, yana aka wepụrụ akwa site na ụrọ site na akwa zuru oke, rue mgbe ntụgharị dị n'akụkụ akụkụ na-enweghị otu ọgịrịga dị ka ndị na-ese chọrọ. Onye ọ bụla nke na-agbachi “atọ” ọhụrụ n'ime fim matte ga-egbu echiche a. Oke ukwu nwere ike ịmịcha mkpụrụ anya na-adịkarịghị mma, akụkụ ahụ ga-apụta kpam kpam.
Oge ụfọdụ, okpo na otu ụdị nke otu ihe yiri ibe ha bụ nke etiti, mana Mazda kpebiri ileghara njikọta a anya dị mma. "Ọ bụghị otu ahụ otu ihe na-ahụkarị!" - ka onye isi mmebe nke ụlọ ihe nkiri America bụ Mazda Julien Montuss kwuru. Naanị grille.
Foto a gosipụtara na sedan nwere akụkụ siri ike n’elu oghere ihu nke ihu, nke dara ma na-agbari na nnukwu radius nso n'ọnụ ụzọ azụ. Ogige enweghị oghere - ahịrị dị nro dị nro na-agbadata ya na wiil ahụ. Nku na ibo nke sedan na hatchback adighi agbanwe agbanwe.
Sedan nwetara chrome na-emebu: ọ bụ gburugburu windo na grille. Na chachback, naanị sill windo na-enwu. Ogwe aka, wiil, oghere ụzọ (ndewo, mkpa maka ọsọ!) Akụkụ ala nke azụ na azụ na-acha uhie uhie na-eji oji.
N'ileghachi anya na "rubles atọ" ọhụrụ m chọrọ ịkpọsa: Mazda - Alfa Romeo ọhụrụ
A ka na-akpọ nkà ihe ọmụma Mazda okwu Japan bụ Kodo (“mkpụrụ obi mmegharị”), mana ọ na-agbanwe. Formukpụrụ ahụ emebere ọtụtụ mgbe ka na-agbanwe agbanwe. Banyere ya afọ iri gara aga, onye bụbu onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi nke European Mazda, onye Bekee Peter Bertvisl kwuru.
Teknụzụ dị elu na-efu ego, ogo nke ihe dị n'ime ụlọ bụ ihe kwekọrọ na itinye ego na ha, naanị na ezigbo njirisi enweghị uru karịa nke jọrọ njọ. Companylọ ọrụ nọọrọ onwe ya enweghị ike ịsọ mpi na okwu nha anya yana nnukwu nsogbu ụgbọala. Ya mere, isi ihe ọ nwere ike inye bụ ezigbo atụmatụ.
Bertvisl kwuru, "Ihe m ga-esepụta bụ otu, ọ gaghị agbanwe ọnụahịa nke ngwaahịa ikpeazụ," Chepụta bụ uru anyị kachasị. "Ihe kachasị apụtaghị naanị ihe, kama ọ bụ imewe na-ere, ọ na-adọrọ uche gaa n’onwe ya, a na-eme ya ka ọ daba na ịhụnanya ma ọ bụ opekata mọọ gaa ụlọ ebe a na-eme ihe ngosi.
Ha kpebikwara ime ka imecha ụlọ ahụ nke ọma site na bends, nkwonkwo na bọtịnụ. Ndụ niile lekwasịrị anya onye ọkwọ ụgbọ ala. Ọbụna a na-etinye oghere ikuku na dashboard, ka ị ghara ịchọ ebe ọzọ na console etiti.
N'ime afọ 15, Mazda3 erewo nde 6 nde na mba 130. Ihe omumu nke ihe omuma ohuru a adighi adi. Ọ dị mbido ikwu maka ihe gbasara Russia. Esstụle banyere akụrụngwa na - akabeghị aka - enwere ike imegharị ya maka mkpa ahịa dị ike. Naanị ihe ejiri mara nke ọma bụ na anyị ga-anata ụgbọ ala klọọkụ golf kacha dị egwu n’enyeghị ego maka imewe ahụ. Kodo - dika ọkọlọtọ.
Ebe e si nweta ya: moto.ru
Pịa ma zụọ ọnụahịa ngwongwo Car